ओलीले दिउँसै रात पार्ने काम गरेको भन्दै रुकुमबाट ऊर्जा लिएर काठमाडौं आउदै प्रचण्ड ! - Rising Dainik
April 7, 2021 Ramash KunwarLeaveaComment on ओलीले दिउँसै रात पार्ने काम गरेको भन्दै रुकुमबाट ऊर्जा लिएर काठमाडौं आउदै प्रचण्ड !
काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि इगिंत गर्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मुलुकमा दिउँसै रात पार्ने काम भएको बताएका छन् । रुकुमको सल्लेबजारमा बुधवार आयोजित कार्यकर्ता भेटघाटमा प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले मुलुकमा भइरहेका विभिन्न किसिमका ष’ड्यन्त्रवि’रुद्ध जनता जागरुक हुनुपर्ने बताए । ‘यहाँ दिउँसै रात पार्ने जस्ता कुरा हुन थाले । जनता सबैतिर जागरुक हुनुपर्‍यो, जनता सबै उठ्नुपर्‍यो,’ प्रचण्डले भने ।
उनले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व होस्, विकास र समृद्धिमा केन्द्रित हुन सकियोस् भनेर आफ्नै प्रस्तावमा कम्युनिस्ट पार्टी एकता गरे पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सहमति, संविधान सबैलाई कु’ल्चिएको आ’रोप लगाए । कम्युनिस्ट एकता भंग गरी एमाले र माओवादी ब्युँताउने सर्वोच्च अदालतको फैसलामा आफूहरू सहमत नभए पनि त्यसलाई मानेरै अगाडि बढ्ने उनको भनाइ थियो ।
‘जबकि त्यो रिट पर्‍या थियो, नामको वि’वादमा । एमाले र माओवादी अलग गरिदिनुपर्‍यो भन्ने दाबी रिट निवेदकले गरेकै होइन । अदालतले नाम अर्को बनाउनुससम्म भन्ला भनेका थियौं हामीले, तर अनौठो भयो’, प्रचण्डले भने, ‘यो सिस्टममा सर्वोच्च अदालतले भनेपछि मान्दिनँ भन्न नपाइने, सहमत छैनौं भन्नचाहिँ पाइने । त्यसैले मानेरै अगाडि बढ्छौं ।’
धेरै ठूलो संघर्ष, बलिदानी र मेहनतपछि मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आइपुगेको भन्दै प्रचण्डले त्यसको रक्षा गर्न आफू लागिरहने बताए । रुकुमबाट आफू ऊर्जा लिएर काठमाडौं फर्किने उनको भनाइ थियो ।
गृहमन्त्री थापाले पार्टी फुटबारे चितवनबाट गरे यस्तो खुलासा !
मुसलमान गायक अलिफको पुरा भयो बद्री पंगेनी भेट्ने सपना-स्वर सुनेर सबै चकित भए,बद्रीकै पहिलो गीत गाउदै